Mamony eo amin'ny taolana ao anaty vilany
Ny fomba tsotra indrindra sy mahavariana amin'ny fanamboarana ny loaka dia ny mampangotra azy ao anaty savony. Voaomana mora sy tsotra fotsiny izy io, tsy ilaina akory ny maka hena alohan'ny hanangom-bokatra. Ity sakafo ity dia mety amin'ny fotoana rehetra - ho an'ny sakafo hariva na ny sakafo hariva, na ho an'ny mahazatra snack. Ary ny tena zava-dehibe, tsy azo ravana izany. Amin'izao fotoana izao dia hiteny aminareo izahay hoe ahoana no ahafahantsika manosotra ny taolam-paty eo amin'ny taolana.
Novonoina tao anaty vilany ny kisoa
miongana amin'ny taolana - 400 g;
Manadio ny Koreana amin'ny antsy amin'ny tavy mavesatra loatra izahay, dia nakariko ny lamba famonosako. Manapaka ny hena izahay ka misy taolana eo amin'ny elany tsirairay avy. Ny hena dia mametraka ao anaty kitapo ary mamono miaraka amin'ny menaka fisakafoana amin'ny lakozia, miezaka ny tsy hikasika ny taolana. Napetrakay ao anaty saosy sy dipoavatra ilay hena. Manaova menaka ao anaty ranom-boasary, ary rehefa sitrana tsara izy, dia atsipazo ho hanitra ny hodinay, mofomamy mandra-bolamena mena. Aorianay ny fampihenana ny afo, esory ny hoditr'osy sy ny hena. Mba hahazoana antoka fa vonona ny lavaka, dia azonao atao ny manindrona azy amin'ny teboka amin'ny antsy ary jereo izay karazana sokatra nipoitra avy amin'ny hena. Tokony ho mangarahara ny ranom-boankazo - Milaza izy fa efa vonona ny sakafo, raha tsy izany dia tokony ho faty mandritra ny minitra vitsy. Ny taolana amin'ny taolana dia vonona.
Ahoana no ahafahana mihinana mofo ao anaty lasitra?
Pork Bulgary - 2 tapitrisa;
Orange - 2 tapitrisa;
divay vinaingitra - 3 tbsp. lovia kely;
zava-manitra - 1 teaspoon;
menaka voly - 1 tbsp. sotro;
Omano ny marinade, fa alaingo ny fonosana, alatsaho ny vinaingitra divay ary ampio tantely. Apetraho ireo zava-manitra (manandrana). Ireo ingahy dia mifangaro, mandra-piverin'ny tantely tanteraka ary ny sira dia mipoitra avy amin'ny orana. Hetezo ny tapany, sasao amin'ny rano ary apetraho amin'ny marinade. Avelao ny hena mandritra ny ora roa. Amin'izao fotoana izao, dia hanadio ny tongolo lay izahay Nosakanay tamin'ny takelaka. Voatapaka ny Pepper, manadio ny afovoany isika ary manapaka amin'ny tady lehibe. Mofomamy ny menaka ao anaty menaka, manolora ny tongolo lay hatramin'ny volamena ary esory amin'ny fonosana izy. Ao amin'ny menaka tongolo dia manaparitaka ny menaka voatoto sy manitra mandra-pahamendrehana. Mampihetsi-po ny fantson-drano madio amin'ny afo isika. Izahay dia mandray ny hena avy amin'ny marinade avy amin'ny ranona tafahoatra, ary mametraka azy ireo anaty vilany, manamboatra ny hena mandra-pahavaratra volombava eo amin'ny andaniny roa. Rehefa manitra ny hena, dia asio rano kely misy vera ao anaty plastika ary esoroy izany amin'ny takelaka iray. Manamaivana ny hafanana izahay ary mangeja ny hena mandritra ny 15 minitra, sira ny hena mba hanandrana amin'ny faran'ny foly. Nataonay teo amin'ny taolam-paty iray ilay loaka nomanina, avy eo dia mametraka dipoavatra, ary amin'ny tampony dia mamolavola voaloboka vaovao.
Hividy divay fotsy
Gullash miaraka amin'ny atin'akoran-trondro sy ny sira
Famafàna ho an'ny dumplings
Potato potato zrazy miaraka amin'ny holatra - sakafo matsiro tsy misy menaka, atody ary hena
Ahoana ny fomba hanamboarana haddock ao amin'ny lafaoro?
Potato miaraka amin'ny fihinanan-kena
Hevi-dehibe 12 mikasika ny VIH, lavitr'ireo mpahay siansa
Vondronosy vita amin'ny quartz agglomerate
Andro iraisam-pirenena ho an'ny mpitsabo nify
16 mpangalatra sy tombom-barotra izay nanjary olo-malaza
Katedralin'ny Trinite Masina
Ahoana no hiomanana amin'ny sary fitifirana?
Chanterelles ao anaty tsiro miaraka amin'ny ovy
Sakona tanora ho an'ny sekoly
Wedding akanjo ho an'ny akanjo bridesmaid
Fahataperana ny placenta 3
Famonoana ny havokavoka - fitsaboana any an-trano
Nahoana no nofinofy ny voa?
Amin'ny akanjo hanaovana ny kiraro ny vehivavy Timberland?
Inona no endrik'ireo voanjo?
Ahoana ny tokony hamakiana ny fikomiana?